जसका लागि घर परिवार त्यागिन्, उसैले धोका दिएपछि रेलको ट्र्याकमा सुतेर..., Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
जसका लागि घर परिवार त्यागिन्, उसैले धोका दिएपछि रेलको ट्र्याकमा सुतेर...
एजेन्सी । विद्यालयमा पढाईका क्रममा एक युवक र युवतीबीच फेसबुकका माध्यमबाट मित्रता भयो । यो मित्रता प्रेममा बदलियो । युवती युवकसँग बिहे गर्न चाहन्थिइन् । यसै कारण उनी युवकसँग भेट गर्न बिहीबार बाराद्वार पुगिन् ।
युवकले पहिला आफ्ना परिवारलाई बिहेका लागि मनाउन भने अनिमात्र बिहे गर्ने भने । त्यसपछि ती युवती आत्महत्या गर्न भन्दै रेलको ट््रयाकमा सुतिन् । प्रहरीलाई सूचना दिएर ती युवतीलाई बचाइयो ।
यसपछि युवती आफैले यस्ता युवकसँग बिहे नगर्ने घोषणा गरिन् । बाराद्वार थाना प्रभारी राजकुमार लहेरेका अनुसार बाराद्वार वार्ड नम्बर ६ निवासी प्रवीण कुमार बरेठ दुई वर्ष पहिला कलेजको पढाइका लागि बिलासपुर गएका थिए । त्यहाँ उनको मित्रता फेसबुकका माध्यमबाट एक युवतीसँग भयो ।
दुवै एकअर्कालाई प्रेम गर्थे । युवतीले दावी गरेकी छन्की ती युवकले उनीसँग बिहे गर्ने बाचा गरेका थिए । यसैले उनी बिहीबार युवकसँग भेट र्ग आएकी थिइन् ।
दुबैको भेट रेल वे स्टेशन नजिकै भयो । युवतीले युवकमाथि बिहेका लागि दबाब दिइन् । तर, युवकले आफ्नो परवारलाई मनाउन नसक्ने भन्दै बिहे गर्न अस्वीकार गरे । यसैले उसले युवतीलाई उसको घर फिर्ता पठाउन खोजे ।
युवती युवकको यो कुराबाट दुखी भइन् । युवतीले बिहेका लागि आफ्नो घर परिवार त्यागेर आएको बताइन् ।
फिर्ता गएपछि बदनाम हुने बताइन् । यसै कारण दुखित युवतीले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरिन् । यसैबीच युवकले प्रहरीलाई फोन गरेर सूचना दिए । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्यो ।